Configura tu teléfono Android y Synapse te lo hace realidad | Androidsis
Fabio | | Iiselfowuni, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Inkampani yaseJamani Synapse ibhengeze ukuba izakwazisa i-terminal nge I-Android 2.2 Froyo kabani Iimpawu zehardware zinokukhethwa ngumsebenzisi ngaphambi kokuyifumana, into eya kuthi ngokuqinisekileyo itsala umdla wabathengi abaninzi abanokubakho.
Nangona kunjalo, iSynapse ilungiselele imodeli esisiseko enokuthengwa ngexabiso eliqikelelweyo le- 300 iiYurophu. Eli xabiso linokunyuka, kwimeko apho iinkcukacha zalo ziguquliwe kwaye izinto zongezwa, ukuya kuthi ga kwiqondo eliphezulu 443 iiYurophu.
Imodeli esisiseko ye Ukuhambelana kunye ne-Android Inesikrini esine-intshi ezi-4,0 ubukhulu ngesisombululo sama-480 × 800 ee-pixels, iprosesa eyi-1 GHz kunye ne-256 MB ye-RAM kunye nenkumbulo yangaphakathi eyi-4 GB. Ikhamera yakho eyakhelweyo inokuba nayo ukuya kwi-12 megapixels isisombululo, imemori ye-RAM inokwandiswa ukuya kuthi ga kwi-1024 MB kwaye inkumbulo yangaphakathi inyuswe ukuya kuthi ga kwi-32 GB.
Ngokumalunga nokunxibelelana kwayo, i-smartphone inokuba nenkxaso yeenethiwekhi ze-3G kunye ne-4G (kunye ne-LTE kunye ne-WiMax), ukongeza kwiBluetooth, iWi-Fi, i-A-GPS kunye neMini HDMI, ihlala ixhomekeke kwindlela umsebenzisi afuna ukuyilungisa ngayo. Kwelinye icala, iselfowuni iya kugutyungelwa yifayile ye- I-aluminium chassis.
Umbono wokukwazi ukuthenga i-terminal iyalungelelaniswa kwaye ikwaqhuba ngenkqubo yokusebenza kwefowuni Android inomdla ngokwenene kwaye yenza iprojekthi yeSynapse ibe yenye indlela yokuqwalaselwa.
Icala elibi layo yonke le nto kukuba okwangoku asinakwenza nto kwaye ayizukubakho de kube phakathi kwikota yokuqala ka-2011 xa beqala ukuthengisa, kuya kuba lula nokuchaza ukuba loluphi uhlobo lwenkxaso abaza kuyinika. ezi ndawo zingafaniyo kwaye ukuba iinguqulelo ezahlukeneyo ze-Android ziya kuba nohlaziyo lwazo. Ewe, ezi ziphelo azizukuza nezicelo zikaGoogle ezifakiweyo, nangona, njengesiqhelo, zinokufakwa kamva.
Iwebhusayithi esemthethweni le nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Qwalasela ifowuni yakho ye-Android kunye neSynapse yenza ukuba yenzeke kuwe
Si el sistema android no depende del hardware… ¿por que nos hacen esperar tanto los fabricantes con las actualizaciones?
I-bug kwiintaka ezinomsindo ikuvumela ukuba uvule amanqanaba
Nokuba i-Android 2.5, okanye i-3.0, iGingerbread ayizukuba yi-Android 2.3